အှနျလိုငျးမှာအရမျးကို နာမညျကွီးနတေဲ့ ခငျညှနျ့နဲ့ရှရေူပါဦးရဲ့ HD ဖိုငျ – Alanzayar
အှနျလိုငျးမှာအရမျးကို နာမညျကွီးနတေဲ့ ခငျညှနျ့နဲ့ရှရေူပါဦးရဲ့ HD ဖိုငျ
သူမကို လူမှုကှနျရကျပျေါမှာ ဆဲဆိုနကွေတဲ့လူတှကေို မရိုငျးစိုငျးကွဖို့ ဆုံးမသွဝါဒစကားတှေ ခွှလေိုကျတဲ့ တပျခဈြသူ ရှရေူပါဦးတပျခဈြသူတဈယောကျဖွဈတဲ့ သရုပျဆောငျရှရေူပါဦးကတော့ သူမကိုယျသူမ အဓမ်မဘကျမှာရပျတညျနတောကို အသိတရားမရနိုငျသေးသူတဈယောကျဖွဈပါတယျ။
တဈနိုငျငံလုံးက ပရိသတျတှရေဲ့ ဝဖေနျမှုကိုလညျးပွငျးပွငျးထနျထနျရရှိခဲ့တဲ့ ရှရေူပါဦးဟာ ဒီကနမှေ့ာလညျး သူမကို ဆိုရှယျမီဒီယာမှာဝိုငျးဆဲနကွေတဲ့လူတှကေို စကားကွီးစကားကယျြတှပွေောပွီး တရားဟောလိုကျပွနျတာကို အခုလိုပဲတှရေ့ပါတယျ။
ရှရေူပါဦးက “နှုတျတဈရာ စာတဈလုံး…တဲ့ လူတှရေဲ့ မနောကံ ကအစပွုလို့ ဝစီကံနဲ့ကာယကံအပွုအမှုတှပွေုလုပျမိတတျကွပါတယျ။ကုသိုလျ အကုသိုလျ ပိုငျးခွားကွပွီး ကုသိုလျအမှုရှိတဲ့ ကံ ၃ ပါးတှပွေုလုပျကွတာ ပွဿနာမရှိပမေယျ့ Social media ပျေါမှာ ဖရုဿဝါစာ ရုတျရငျ့ကွမျးတမျးတဲ့အပွုအမူအွပောအဆိုတှဟော နှုတျတဈရာ စာတဈလုံးဆိုတဲ့အတိုငျး သမိုငျးတဈခုအဖွဈကနျြရှိနမှောပဲဖွဈလို့
မိမိသမိုငျးကို ဘယျလိုလှအောငျ ခနျြရဈမလဲ? အကညျြးတနျအောငျရော ခနျြရဈကွမှာလား? Caption တဈကွောငျး Comment တဈလုံးနဲ့ ကိုယျ့ဘဝကိုမွှငျ့မလား ဆှဲခသြှားမလားဆိုတာ ဉာဏျနဲ့ဆုံးဖွတျကွပါ။ ထမငျးစားကွတဲ့သူတှပေဲလေ။ Public က ကွညျ့ကောငျးလို့ ကွညျ့နတေယျမြားထငျမှတျနရေငျတော့….
မိမိကို မှေးထုတျပေးခဲ့တဲ့ မိဘတှေ တိရိစ်ဆာနျလုံးလုံးဖွဈပွီသာမှတျပတေော့” ဆိုပွီး သူမရဲ့ ဖစျေ့ဘုတျစာမကျြနှာကနေ ရေးသားလာတာပဲဖွဈပါတယျ။ ရှရေူပါဦးကတော့ ကိုယျ့လုပျရပျကိုယျမှနျမမှနျ မသုံးသပျပဲ ဝဖေနျကွတဲ့ပွညျသူတှကေိုတောငျတရားသဘောနဲ့ယှဉျပွီး စကားကွီး စကားကယျြတှပွေောလာတာပဲ ဖွဈပါတယျ။crd
အွန်လိုင်းမှာအရမ်းကို နာမည်ကြီးနေတဲ့ ခင်ညွန့်နဲ့ရွှေရူပါဦးရဲ့ HD ဖိုင်
သူမကို လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာ ဆဲဆိုနေကြတဲ့လူတွေကို မရိုင်းစိုင်းကြဖို့ ဆုံးမသြဝါဒစကားတွေ ခြွေလိုက်တဲ့ တပ်ချစ်သူ ရွှေရူပါဦးတပ်ချစ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ သရုပ်ဆောင်ရွှေရူပါဦးကတော့ သူမကိုယ်သူမ အဓမ္မဘက်မှာရပ်တည်နေတာကို အသိတရားမရနိုင်သေးသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်နိုင်ငံလုံးက ပရိသတ်တွေရဲ့ ဝေဖန်မှုကိုလည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်ရရှိခဲ့တဲ့ ရွှေရူပါဦးဟာ ဒီကနေ့မှာလည်း သူမကို ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာဝိုင်းဆဲနေကြတဲ့လူတွေကို စကားကြီးစကားကျယ်တွေပြောပြီး တရားဟောလိုက်ပြန်တာကို အခုလိုပဲတွေ့ရပါတယ်။
ရွှေရူပါဦးက “နှုတ်တစ်ရာ စာတစ်လုံး…တဲ့ လူတွေရဲ့ မနောကံ ကအစပြုလို့ ဝစီကံနဲ့ကာယကံအပြုအမှုတွေပြုလုပ်မိတတ်ကြပါတယ်။ကုသိုလ် အကုသိုလ် ပိုင်းခြားကြပြီး ကုသိုလ်အမှုရှိတဲ့ ကံ ၃ ပါးတွေပြုလုပ်ကြတာ ပြဿနာမရှိပေမယ့် Social media ပေါ်မှာ ဖရုဿဝါစာ ရုတ်ရင့်ကြမ်းတမ်းတဲ့အပြုအမူအြေပာအဆိုတွေဟာ နှုတ်တစ်ရာ စာတစ်လုံးဆိုတဲ့အတိုင်း သမိုင်းတစ်ခုအဖြစ်ကျန်ရှိနေမှာပဲဖြစ်လို့
မိမိသမိုင်းကို ဘယ်လိုလှအောင် ချန်ရစ်မလဲ? အကျည်းတန်အောင်ရော ချန်ရစ်ကြမှာလား? Caption တစ်ကြောင်း Comment တစ်လုံးနဲ့ ကိုယ့်ဘဝကိုမြှင့်မလား ဆွဲချသွားမလားဆိုတာ ဉာဏ်နဲ့ဆုံးဖြတ်ကြပါ။ ထမင်းစားကြတဲ့သူတွေပဲလေ။ Public က ကြည့်ကောင်းလို့ ကြည့်နေတယ်များထင်မှတ်နေရင်တော့….
မိမိကို မွေးထုတ်ပေးခဲ့တဲ့ မိဘတွေ တိရိစ္ဆာန်လုံးလုံးဖြစ်ပြီသာမှတ်ပေတော့” ဆိုပြီး သူမရဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာကနေ ရေးသားလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ရွှေရူပါဦးကတော့ ကိုယ့်လုပ်ရပ်ကိုယ်မှန်မမှန် မသုံးသပ်ပဲ ဝေဖန်ကြတဲ့ပြည်သူတွေကိုတောင်တရားသဘောနဲ့ယှဉ်ပြီး စကားကြီး စကားကျယ်တွေပြောလာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။crd
Previous Article မနကျဖွနျ မနကျ ၄ နာရီမှ စတငျကာ ရနျကုနျမွို့တှငျး ယာယီပိတျထားမညျ့ လမျးကွောငျးမြား ထုတျပွနျ
Next Article အဆငျ့အတနျးရှိတဲ့ အမြိုးသမီးဖွဈဖို့ ရောကျလရောမှာ လိုကျနာသငျ့တဲ့ အခကျြ (၅) ခကျြ